> Resource > Video > Sida loo qabsaday Videos ka Screen
US isticmaala Internet daawaday 13.5 bilyan oo online videos lagu jiro October, 2008, sixitaanka koror dhan 45 boqolkiiba ah marka la barbar dhigo sannad ka hor, sida uu sheegay ComScore Video Metrix. Badan oo dadka isticmaala YouTube ayaa isha ku samaynta Casharrada video ka qabashada screen oo iyaga la wadaago ee YouTube. Ma taqaan sida loo soo qabto videos ka screen iyo iyaga wadaagaan on YouTube?
Waxaa jira inta badan saddex siyaabood in ay qabsadaan videos ka screen: kaamero ama fiidiyo , VCR ah (Video cajalad taariikhqorihii), oo taariikhqorihii video shaashada . Waxaan ka dhigi doonaa fikrad kooban oo ku saabsan sida ay u shaqeeyaan on qoro videos ee shaashadda kombiyuutarka.
1. Camera ama fiidiyo
Tani waa sida ugu dareen si ay u sameeyaan qabashada video ka shaashadda kombiyuutarka. Calan mashiinka wax lagu qoro oo aad ku Maala ah, waxay farta ugu screen iyo record. Waa sahlan, laakiin tayada video ka dhalanaya noqon doonaa haydh iyo bilig. Waxay noqon kartaa mid waxtar leh si aad u hesho fikrad ah waxa aad samayn, laakiin way kugu adkaan kartaa in la arko wixii faahfaahin ah ee shaashadda.
Haddii aad kaarka video leeyahay dekedda TV-out ah waad ku xidhan karto VCR ah oo si toos ah u cajalad u qoraan. Tayada video waxaa lagu hagaajin karaa habka ugu horeysay. Maxaa yeelay, xallinta iyo macaamiloon of telefishanka ka yar tahay shaashadda kumbiyuutarka, video weli noqon doonaa haydh iyo hoos ka image asalka. Si aad u hesho natiijo wanaagsan aad u baahan tahay si ay ula qabsadaan aad screen xal 800 × 600 ugu badnaan, la doorbidayo 640 × 480.
3. Video screen taariikhqorihii
Waxaa ka shaqeeya sida barnaamijka asalka ah oo ay u qoraan waxa ka socda shaashada iyo dhalin faylasha video. Natiijadan ayaa waxa ay weyn oo aan khasaaro ah oo faahfaahin, waxaana laga yaabaa sida ugu wanaagsan ee ay u abuuraan videos ee hawlaha shaashadda. In kastoo codsiyada kala duwan ayaa kaa caawin kara rikoorka screen video, DemoCreator taagan iyaga. By isticmaalkiisa, idinku abuurey kartaa software video Casharrada iyo goodhiyaha website kaliya saddex tallaabo. Halkan aan aragno sida:
1 Calan doorasho lagu duubo iyo aad ugu qortid shaashadda
Dooro soonaha qabashada iyo hab duubista. Bilow aad duubo iyo F10 saxaafadeed ay joojiyaan marka lagu duubo waa in ka badan.
Marka la dhammeeyo ka duubay, waxaad tagi kartaa xaalkaa bogagga duubay . Waxaa jira music, sheeko, qoritaan, sawirada, interactivities iyo xitaa animations in aad kor duubo, sidaas samaynta goodhiyaha ayaa in ka badan kartoon ah iyo is-dhexgal.
Naadiya qaab video aad jeceshahay ah. Taariikhqorihii screen Tani waxay awood u isticmaala si ay u daabacaan qaabab kala duwan ee video sida Jabbuuti, AVI iyo EXE u fudud la wadaago. Waxaad gali laga yaabaa in filim Flash in aad martida loo yahay, ama geliyaan ay video in ay goobaha la wadaago video sida YouTube, demo video ah leh qof walba wadaaga!
Wixii faahfaahin ah, waxaad ka arki kartaa Hagahan Tutorial abuuray by DemoCreator taariikhqorihii shaashadda. Guji ka Screen icon Full on bar play ah si loo hubiyo video ee shaashad buuxda.